Maawa mashanu naMario, kubudirira kushoropodzwa munharaunda kwaMiguel Delibes | Zvazvino Zvinyorwa
Miguel Delibes anoonekwa semumwe wevanonyanya kukosha vanyori vezana ramakumi maviri, nekuda, pakati pezvimwe zvinhu, kune yake yehunyanzvi: Maawa mashanu naMario. Rakaburitswa muna 1966, ino nganonyorwa ndeyekutendeka inotsanangudza zvemagariro, chiitiko chakakosha kwazvo muSpain pakati pezana ramakore rapfuura. Naizvozvo, yaive nzira yekurondedzera ine huremu hwakakura hwetsika panguva yekutonga kwaFranco.
Kubudikidza nehurukuro yemukati yemukadzi ari mudambudziko -Carmen, protagonist wake- Delibes akafumura kwakawanda kusagadzikana kwezvematongerwo enyika nekudyidzana muSpain panguva iyoyo. Kwete pasina, pepanhau El Mundo zvaisanganisira Maawa mashanu naMario mukati mezita rake re "mazana zana enganonyorwa akanakisa ezana ramakumi maviri."
1.1 Dzidzo dzechiuto uye ruzivo
1.3 Mabhuku ekunyora
1.3.1 Zororo remanoveli naMiguel Delibes
1.4 Rufu nenhaka
2 Kuongorora Maawa mashanu naMario
3.0.1 Musiyano uripo pakati pemararamiro maviri
Miguel Delibes Setién akaberekerwa muValladolid, Spain, muna Gumiguru 17, 1920. Aive mwana wechitatu wemuchato pakati paAdolfo Delibes naMaría Setién. Baba vake vaive mubati wechigaro weMutemo paChikoro cheMabhizimusi cheValladolid. Ukuwo, sekuru vake vaamai - Miguel María Setién- vaive gweta rinozivikanwa uye vaive nhengo yeCarlist yezvematongerwo enyika.
Dzidzo dzechiuto uye ruzivo
Muna 1936 akapedza chikoro chesekondari kubva kuLourdes College kumusha kwake. Nguva pfupi yapfuura Akashanda semuzvipiri muuto revarwi revapanduki panguva yeHondo Yenyika yeSpain (1936-39). Pakangopera hondo, akadzokera kumusha kwake kunodzidziswa kuyunivhesiti; akateedzana akapedza zvidzidzo muCommerce, Mutemo uye neUnyanzvi.
Muna 1941, bepanhau reValladolid Kuchamhembe kweCastile akahaya maDelibes semuartoon. Mushure mekupedza kudzidza seMercantile Intendant muBilbao, wechidiki Miguel akatora sachigaro wemutemo wekutengesa paUniversity yeValladolid. Muna Kubvumbi 1946 akaroora Ángeles Castro, aive Museum yake mune mazhinji emabasa ekunyora emunyori wechiSpanish.
Bhuku rake rekutanga raimiririra kutanga mune dhizaini: Mumvuri wecypress wakareba (1947), anokunda iyo Nadal Prize. Zvisinei, bhuku rake rechipiri, Kunyange izuva (1949), yakatemerwa chibvumirano naFranco. Mushure meizvozvo, akatanga kunyatsoteedzerwa nevanoona nezvehutongi paakadzidzisa zvidzidzo zvine chekuita neHondo Yenyika.
Zvisinei, ne Nzira (1950) Delibes akagadza kuzvitsaurira munyika dzetsamba uye zvinyorwa zvinyorwa zvenguva yeSpanish yapashure pehondo. Kunyangwe, zviripachena, kudzivirirwa hakuna kumira kumushungurudza, kunyanya mushure mekugadzwa mutevedzeri wemutungamiriri we Kuchamhembe kweCastile. Kunyangwe izvi, munyori weValladolid haana kumisa rwiyo rwake mukati memakumi mashanu uye akaramba achiburitsa avhareji yebhuku rimwe pagore.
Zororo remanoveli naMiguel Delibes
Mwanakomana wangu akanamatwa Sisi (1953).
Diary yaHunter (1955). Mukundi weNational Prize yeMabhuku.
Dhayari yemutami (1958).
Shizha dzvuku (1959). Mukundi weJuan March Foundation Mubairo.
Makonzo (1962) Vatsoropodzi Mubayiro Wahwina.
Mufananidzo weye castaway (1969).
Muchinda akabviswa pachigaro (1973).
Hondo dzemadzitateguru edu (1975).
Vhoti inopokana yaSeñor Cayo (1978).
Ivo vatsvene vasina mhosva (1981).
Tsamba dzerudo dzinobva kune akasarudzika sexagenarian (1983).
Gamba huni (1987). Anokunda weGuta reBarcelona Mubairo.
Mukadzi mutsvuku pane grey kumashure (1991).
Dhayari remudyandigere (1995).
Mupanduki (1998). Mukundi weNational Prize yeMabhuku.
Miguel Delibes akashaya musi waKurume 11, 2010. Vanhu vanopfuura zviuru zvisere vakapinda kuchechi yake yaipisa. Akasiya basa rakakura kwazvo uye rakapfuma. Zvakanaka, kunze kwemabhuku ake makumi maviri akaburitswa, akapedzisa kuburitswa kwemabhuku mapfumbamwe enhau pfupi, mabhuku matanhatu ekufambisa, mabhuku gumi ekuvhima, 20 zvinyorwa uye zvisingaverengeke zvinyorwa zvepepanhau.
Analysis of Maawa mashanu naMario
Maawa mashanu naMario.
Unogona kutenga bhuku pano: Maawa mashanu naMario
Musi waApril 1, 1939, rwisano yakanyanya kunetsa munhoroondo yazvino muSpain yakapera. Kukunda kwaFranco kwaireva kukwira kwevaFalangist kuenda pasimba pasi pemutemo usingapikike we "el caudillo". Pamusoro pezvo, shanduko yebumbiro remutemo ya1942 na1947 yakazadzisa "kuisirwa mutemo" kwehutongi, pamwe nekubatana kunodiwa kweChechi yeKaturike.
Nhamo yakanga yakapararira, pakanga pasina kodzero yekushoropodzwa kana chero kuora mwoyo kwakananga. In consecuense, rondedzero yakazvipira munharaunda yakave imwe yemawindo mashoma anokwanisa kutsanangura kutambura kwechikamu chikuru chevagari. Mupfungwa iyi, zviitiko zvakanyanya kucherechedzwa zvinotevera:
Mubhadharo wevazhinji vevashandi hauna kana kubvumidza kurarama kwavo.
Kunyangwe akawanda mabhizinesi madiki akagadzirwa, aya anowanzo kutorwa kubva pamusika mutema (nekuti vanga vasina imwe sarudzo).
Patriotism akaruramisa zvese. Kubva pakubviswa kwemafuta (muminda ine bituminous) kusvika kune yekusaongorora kwekupusa kana paine mubvunzo "zvibodzwa zvakanaka" zvehutongi kune hutongi hwayo.
Mukati meiyo subgenre yemabhuku akabatanidzwa, Maawa mashanu naMario ndezve zviripo neorealist novel (nguva pakati pa1939 - 1962). Mumutambo uyu, Delibes inoshandisa chirevo chemunhu mukuru - uyo ari kumuka kwemurume wake- kuburitsa nuances yemunhu akashungurudzika, egocentric zvakanyanya uye, kunyanya, chaizvo fascist.
Musiyano uripo pakati pemararamiro maviri
Mutambi mukuru anoburitsa munhaurirano yake yemukati zvese zvakashoreka kumurume wake anonoka. Zvimwechetezvo, zvinopa muverengi aine yakazara tarisiro yehupenyu hweiyo Valladolid yepakati kirasi panguva yepashure pehondo nguva. Nekudaro, hukasha hwese hwekuratidzira hunoderedzwa, kune imwe nhanho, nezvikamu zvipfupi zvinosetsa kana zvinyoro zvechinyorwa.
Mutambo uyu zvakare unoratidza musiyano uripo pakati pemhuri dzevamiriri. Kune rimwe divi, amai vaCarmen vaive nehupenyu hwakadzikama, hwakajeka uye hwakavimbika, sababa vake vaive mutori wenhau wepepanhau ABC. Kune rimwe divi, amai vaMario (murume akafa) vaichengeta maitiro asina hanya uye baba vake vaive murume asina tariro, vasina hunhu kunyange kufa.
Pazasi pekunyomba kwese kwaCarmen, pane kurudziro yezvinhu. Zvakanaka, kunyunyuta kwake kukuru ndekwekuti murume wake haana kuwana mari inokwana muhupenyu kumutengera zvimwe zvinhu uye kugamuchira mamwe mabasa. Iye zvakare anoratidzira rutivi rwake rusina maturo nekuzvirova dundundu pamusoro pezvaakatarisisa zvaakatambira kubva kune vamwe vakomana paaive mudiki.
Uye zvakare, Menchu ​​- zita remadunhurirwa re protagonist - haana kunzwisisa hunhu hwaMario uye hunhu hwakanaka nevanhu vanobva kumakirasi anotambura zvakanyanya. Pekupedzisira, protagonist inoreurura kuve nekuve nerudo neshamwari yehucheche iyo (iye anopika) haina kukura. Mutambo unovhara nechikumbiro chaCarmen chekuregerera murume wake.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Maawa mashanu naMario